BeiTaAd: ny doka izay nisy tamin'ny fampiharana 238 tao amin'ny Google Play | Androidsis
ANDROID ALERT !!: BeiTaAd, ilay doka miafina ao anaty fampiharana 238 ao amin'ny Google Play
Eder Ferreno | | Fampiharana Android, fiarovana
Mikorisa izy ireo indraindray Fampiharana voan'ny malware amin'ny Google Play. Nitranga izany tato ho ato fampiharana samihafa an'ny Do Global, na dia nitranga tamin'ny tranga maro aza izy io. Hitanay koa ireo rindranasa voan'ny doka amin'ny tranga sasany, miaraka amin'ny antsoina hoe adware, izay efa nisy tranga maromaro. Ity indray no tranga misy amin'ity indray mitoraka ity, miaraka amin'i BeiTaAD, izay hita amina taratasy fangatahana 238 izay efa am-bolana maro.
Ireo rindranasa ireo, avy amin'ny mpamorona sinoa CooTeek, dia nisy BeiTaAd tao anatiny. Teo anelanelan'izy rehetra ireo dia nanampy ny fampidinana 440 tapitrisa. Noho izany dia nanana fanatrehana lehibe teo amin'ny tsena izy ireo ary nisy fiatraikany tamin'ny mpampiasa maro tamin'ity dokambarotra mahery setra ity.
Anisan'ireo rindranasa voakasik'izany, ireo 238, izay nesorina tamin'ny Google Play nony farany, dia mahita sasany fanta-daza izahay. Ny anarana toa ny Touchpal, ManFit na HiFit dia fampiharana mety efa mahazatra ny sasany aminareo izany. Izy rehetra dia nanana an'ity adware ity tao anatiny, izay niteraka olana maro tamin'ireo mpampiasa Android.
Ny fiasan'ny BeiTaAd dia tsy mitovy amin'ny tranga hafa mitovy amin'ny taloha. Midika izany fa Ireo fampiharana ireo dia voadoka tamin'ny doka na aiza na aiza, amin'ny teboka mahasosotra. Ho fanampin'izany, amin'ny tranga maro dia saika tsy afaka nampiasa ilay rindranasa tamin'ny finday mihitsy izy io, izay manelingelina indrindra an'ireo mpampiasa. Mampalahelo fa niharatsy hatrany ny raharaha tamin'ity tranga ity. Tsy nisy fiatraikany tamin'ny doka fotsiny ny doka.
Satria nitarina tamin'ny telefaona koa ny doka. Tamin'izany fomba izany, nisy ny dokam-barotra na aiza na aiza, manomboka eo amin'ny toeran'ny fitaovana, hatrany amin'ny bara fampandrenesana na eo amin'ny efijery hidin-trano. Amin'ny tranga sasany, nisy ny mpampiasa nitatitra fa saika tsy azo natao ny mampiasa telefaona. Noho ny doka maro be izay, saika tsy nisy nilana azy intsony. Ka ity BeiTaAd ity dia iray amin'ireo dokambarotra mahery setra indrindra hatreto.
Ary koa, ny fomba nivoahan'ny doka dia liana be ihany koa. Rehefa avy nametraka ilay fampiharana dia tsy dia nisy dokambarotra tao anatin'ny 24 ora voalohany, fa nitombo kosa ny isany rehefa nandeha ny fotoana. Na dia tsy izany aza hatramin'ny roa herinandro lasa izay ny doka mampihetsi-po indrindra Naseho tamin'ny fampiharana izy ireo ary tsikelikely tamin'ny telefaona koa. Ka nisy ny fizotrany amin'io lafiny io, izay tsy isalasalana fa nisy fiatraikany tamin'ny mpampiasa maro. Ny rindranasa 238, tsy an-kanavaka, dia nisy an'ity BeiTaAd ity tao anatiny.
Fiarovana tsy mitongilana
BeiTaAd dia dokambarotra mahery setra, efa mazava io, fa ny tena mahagaga indrindra dia izany dia nandingana ny karazana fanaraha-maso fiarovana amin'ny Google Play. NA Play Protect dia azo ampiasaina hifehezana malware na karazana fandrahonana, zavatra hitantsika taloha, amin'ity tranga ity dia tsy nahavita ny asany izy. Ireo rindranasa dia efa ela no misy misintona ao amin'ny magazay, tsy misy misakana azy io. Ny famelana ireo fampidinana azy dia nahatratra 440 tapitrisa tamin'ny fitambarany.
Mazava ho azy, noho izany fepetra fiarovana bebe kokoa no ilaina ao amin'ny Google Play. Ny fivarotana fampiharana dia miasa amin'ny fepetra, toy ny fampitomboana ny mpiasa handinika ny fangatahana. Na dia ny fanontaniany aza dia hanampy amin'ny toe-javatra toy izany. Satria mahagaga ny habetsaky ny fotoana nisian'ireo rindranasa ireo miaraka amin'ny BeiTaAd hisintona ho an'ireo mpampiasa Android, miaraka amin'ny loza aterak'izany. Ka tsy hahagaga raha misy fepetra bebe kokoa momba izany manambara tsy ho ela, hisorohana ny toe-javatra toy izao indray.
ny lisitr'ireo fampiharana feno voan'ny BeiTaAd izany, ary nesorina tao amin'ilay magazay. Afaka mahita azy ianao ato amin'ity rohy ity. Raha manana ny iray amin'ireo rindranasa ireo ianao dia tsara kokoa ny manala azy haingana araka izay azo atao amin'ny findainao. Satria izy ireo dia fampiharana namorona
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Tutorials » fiarovana » ANDROID ALERT !!: BeiTaAd, ilay doka miafina ao anaty fampiharana 238 ao amin'ny Google Play
OUKITEL C16 Pro: Ny finday avo lenta azo aleha amin'ny alàlan'ny rano mitete eo amin'ny tsena